Tirakoobka Heerka Saadaasha 2020 SaaS | Martech Zone
Software ahaan Adeeg ahaan (SaaS) Tirakoobka Heerka Tirakoobka ee 2020
Arbacada, Nofeembar 11, 2020 Thursday, April 1, 2021 Jacfar Sadhik
Dhamaanteen waan maqalnay Salesforce, Hubspot, ama MailChimp. Runtii waxay keeneen xilligii kordhinta Kobaca SaaS. SaaS ama Software-ahaan-adeeg ahaan, si fudud loo dhigo, waa marka adeegsadayaashu ay uga faa'iideystaan ​​barnaamijka ku saleysan rukunka. Faa'iidooyin badan sida amniga, meel yar oo keyd ah, dabacsanaan, marin u helid kuwa kale, moodooyinka SaaS waxay cadeeyeen inay aad u miro dhalinayaan ganacsiyada inay koraan, hagaajinta qanacsanaanta macaamiisha iyo khibrada macaamiisha.
Kharashka softiweerku wuxuu ku kori doonaa 10.5% sanadka 2020, badankoodna waxaa lagu wadaa SaaS. SaaS iyo howlaha daruuraha xitaa waxay heleen kor u kac sababo la xiriira Covid-19 iyadoo 57% ka mid ah shirkadaha qorsheynaya inay kordhiyaan howlahooda.
Gartner iyo Flexera
Kobaca SaaS waa la sharixi karaa iyadoo ay ugu wacan tahay natiijooyinka baaxadda leh ee lagu gaarey adeegsiga suuqgeynta, guusha macaamilka, iibka, iyo keydinta. Ganacsiyada SaaS waa la barbar dhigi karaa dhirta. Ku noolaanshaha, bixinta, horumarka, koritaanka, iyo qandaraas marka waqtigu yimaado. Markuu ganacsigu korayo, macaamiisha sidoo kale way yimaadaan oo baxaan. Qiimayaashani waxay saameyn ku yeelan karaan ganacsigaaga oo waxay xaddidi karaan xaddidnaanta suuqa iyo koritaanka.
SaaS Churn Rate: Waa la sharaxay
Qiimaha SaaS, si fudud u dhig, oo muuji heerka ay macaamiishaada jira ku joojinayaan / ku joojinayaan diiwaangelintooda muddo cayiman.
Waxay tilmaan u tahay sida maalgashade adeegsadehu ugu jiro bixintaada marka la eego waxtarka, ujeedada, qiimaha, iyo gaarsiinta. Qiyaasta churn ayaa go'aamisa waxyaabo kale, sida aad wax soo saarka ayaa ku hawlan la macaamilka.
Iyo koritaanka SaaS, heerka koritaanka (saxiixyada cusub, kor u qaadista, iwm.) Waa inay had iyo jeer ka sarreysaa heerka qulqulka (la joojiyay, macaamiisha lumay).
Maaddaama SaaS la saadaalinayo inay u kobocdo adduunka, haynta macaamiisha iyo guusha macaamiisha ayaa muhiim u ah hoos u dhig qiimaha SaaS. Maaddaama qanacsanaanta macaamilku ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka dhexeeya shirkadaha guuleysta iyo kuwa kale, waayo-aragnimada macmiilku waxay noqotay arrin muhiim u ah guud ahaan guusha ganacsiga iyo kobaca shirkadda.
Si aan kuugu cusboonaysiinno isbeddellada ugu dambeeyay oo aad barato waxa laga fogaado, waxaan diyaarinnay liistada 10 SaaS Churn Statistics ee 2020.
Sida loo Tiriyo Heerka Cuncunka
Waxay u muuqan kartaa wax fudud, laakiin si loo xisaabiyo Heerka 'Churn Rate' ee Adeeg ahaan Adeeg ahaan, waxaa jira waxyaabo yar yar. Si fudud, Churn Rate waa tirada macaamiisha ka tagtay oo loo qaybiyay tirada guud ee macaamiisha bilowga muddada la qiyaasay… loo xisaabiyay boqolkiiba. Waa tan Caanaha 'Churn Rate':
Waxyaabaha maskaxda lagu hayo marka la xisaabinayo Churn:
Waa inaad ka reebtaa dhammaan macaamiisha cusub xisaabtan. Churn waa isbarbardhigga kaliya ee la kansali karo iyo macaamiisha jira.
Waa inaad xisaabisaa adoo adeegsanaya isla muddadaas, laakiin taasi way noqon kartaa khiyaano. Waxaa laga yaabaa in macaamiisha qaarkood ay leeyihiin qandaraasyo dherer kala duwan ah, heshiisyo lacag bixin oo kala duwan, ama dalabyo… waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u kala soocdo xisaabinta mid walba si aad u aragto haddii saameyntaasi ay sii socoto.
Waa inaad sii kala qeybisaa macaamiishaada isku darka alaabta ama xirmada ay ka tirsan yihiin. Tani waxay ku siin doontaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida wanaagsan ee qiimeyntaada ama xirmooyinka alaabadaadu u saameeyaan qulqulka.
Waa inaad ku xisaabtantaa xaddiga miisaankaaga iyadoo ku saleysan isha iibka iyo qiimaha iibku yahay. Waxaa laga yaabaa inaad ogaato in xaddiga xawaaraha ee ololahaaga ugu badan ee iibsigu ay ka dhigi karto istiraatiijiyadda suuq-geynta mid aan lagu sii wadi karin caafimaadka shirkaddaada.
Waa inaad si joogto ah u xisaabisaa xoqidda si aad ugu kuur gasho isbeddellada ku yimaad nabarrada iyo inay sii kordheyso (haynta liidata) ama ay sii wanaajineyso (daacadnimada macaamiisha) muddo kadib.
Churn had iyo jeer maahan wax xun companies shirkado badan oo SaaS ah ayaa u isticmaala churn si ay ugu beddelaan macaamiisha aan faa'iido doonka ahayn kuwa faa'iidada badan leh. In kasta oo laga yaabo inaad yeelato sicir-celin xun xaaladahaas, ganacsigaagu wuxuu noqon doonaa mid faa'iido badan mustaqbalka fog. Tan waxaa loo yaqaan Dakhliga Soo Noqnoqda ee Bilkasta Soo Noqda (MRR) Churn, halkaasoo dakhligaaga dheeraadka ah ee macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira ay ka sii gudbayaan dakhliga aad ku lumineyso hoos u dhaca iyo joojinta.
10 SaaS Churn Statistics ee 2020
Saacadaha SaaS iyo muddooyinka qandaraaska - Shirkadaha SaaS ee qandaraasyada ay la leeyihiin macaamiishooda 2 sano ama ka badan ay u badan tahay inay soo sheegaan heerarka hoos u dhaca. Qandaraasyada dhaadheer, midkood sanadle ah ama kabadan, ayaa horseeday hoos udhaca sicir bararka leh moodooyinka bilaha ee billaha ah ee lakulmay xaddiga kudhawaad ​​14%. Tan ayaa lagula xisaabtami karaa daacadnimo, khibrada isticmaalaha, iyo ku guuleysiga wax soo saarka iyo kuwa kale.
Heerka Churn iyo Heerka Kobaca - Shirkadaha koritaankoodu hooseeyo iyo shirkadaha bilowga ah waxay u badan tahay inay la kulmaan heerar kor u kaca. Inta badan shirkadaha kobaca hooseeya, ku dhowaad 42%, waxay u muuqdaan kuwo ka sarreeya shirkadaha koritaanka sarreeya. Tan waxaa loo aanayn karaa sheyga, dadaalka suuq gaynta, ama dhaq dhaqaaqa kaqaybgalka macaamiisha.
Sicirka Sannadlaha ah ee Median - Ganacsiyada sameeya wax ka yar $ 10 milyan sanadkii, 20% waa heerka dhexdhexaadka ah ee SaaS churn rate. Shirkadaha SaaS ee dhexdhexaadka ahi waxay lumiyaan qiyaastii 5% ilaa 7% boqolkiiba dakhliga si ay u sii socdaan sannad kasta. Tani waxay ka dhigan tahay, in ka badan saddex-meelood laba shirkadaha SaaS waxay lahaayeen 5% ama in ka badan sicirrada sanad gudihiis. Sidoo kale, 5-7% waxaa loo tixgeliyaa 'qallafsanaan la aqbali karo' iyadoo kuxiran cabirka ururka.
SaaS Churn Rate iyo Iibinta - Iibinta iyo xiriirka macaamilku waa aasaaska lagu haayo macmiil iyo chuck churn. Sida laga soo xigtay MarketingCharts, iibinta kanaalka ayaa leh qulqulka ugu sareeya ee 17% halka iibka duurka uu celcelis ahaan yahay 11% ilaa 8%. Iibinta gudaha waxay leeyihiin xaddiga 14%. Tani waxay mar kale xaqiijineysaa muhiimadda xiriirka macaamiisha iyo dadaallada shakhsi ahaaneed ee ilaalinta iyo kordhinta daacadnimada macaamiisha.
Barnaamijyada Mobilada iyo SaaS Churn Rate - Heerka haynta bil kasta ee barnaamijyada moobiilka ee 41.5% waa muujin. Tani waxay kudhowaad 4 jeer ka sarreysaa khibrada isticmaale ee websaydhka sida ku xusan Reply.io. Barnaamijyada moobiilka ee is-dhexgalka ah ee diiradda saarey gaarsiinta alaabada ayaa gacan ka geystey hoos u dhaca heerka xawliga.
Adeegga Macaamiisha iyo Heerka Cuno - Halka 47% ay kugula talinayaan ganacsi haddii ay bixiso adeeg macmiil oo wanaagsan iyo jawaabta, 42% waxay ka baxeen rukunka SaaS sababo la xiriira adeegga macaamiisha oo liita Isticmaalayaashu hadda waxay rabaan khibraddu inay noqoto mid sahlaysa guusha macmiilka. Waxaa jira baahi loo qabo in kor loogu qaado guusha macaamilka si loo yareeyo sicirka qulqulka.
Tirada Macaamiisha iyo Sicirada Qiimaha - Ku dhowaad 69% ee shirkadaha SaaS waxay tixgeliyaan tirada macaamiisha inta ay cabbirayaan heerarka qulqulka. 62% ayaa dakhliga u adeegsada halbeeggooda asaasiga ah si ay u fahmaan heerarka qulqulka. Taas ka sokow, rukhsadaha isticmaalaha sidoo kale waa hab kale oo lagu cabbiro heerarka qulqulka.
La Wareegista Macaamiisha Cusub iyo Heerarka Caloosha - Shirkaduhu waxay mudnaanta siinayaan soo iibsashada macaamiisha cusub si ay u sii ahaadaan oo ay u hagaajiyaan tirooyinka. Kaliya 59% ayaa qiimeeya cusboonaysiinta macaamiisha jirta iyo qanacsanaanta mudnaanta. La'aanta guusha macaamiisha waxay gacan ka geysaneysaa sicir bararka sare. Kicinta iyo iibinta iskutallaabta waxay leeyihiin awood sare oo lagu balaarinayo ganacsiga.
Saat Quick Quick - Inta badan shirkadaha SaaS ee sida xawliga ah u koraya waxay leeyihiin celcelis ahaan Saamiga Degdega ah ee 3.9 ilaa 1. In kasta oo Mamoon bartilmaameedkiisu yahay shirkadaha rajada leh ee SaaS uu yahay 4, shirkaduhu waxay muujiyeen natiijooyin wanaagsan iyagoo soo saaray dakhli lumay.
Sicirada Churn ee kordhay - Halka 34% ka mid ah shirkadaha ay arkeen hoos u dhacooda, 30% ayaa soo sheegay in heerarkooda qulqulka uu kordhay. Waxaa sidoo kale la ogaan karaa in shirkadaha badankood ee ka warbixiya sicir bararka sare ay soo saareen dakhli ka yar $ 10 milyan.
Khadka hoose: Samee SaaS-kaaga inuu ku dhego
Waxaa loo baahan yahay in la aqoonsado in haynta macaamiisha, daacadnimada, iyo guusha ay yihiin furayaasha koritaanka ganacsiga iyo guusha. Adoo matalaya waayo-aragnimada macaamiisha goor hore, mid baa yareyn kara heerarka qulqulka. Sidoo kale waa muhiim inaad ka caawiso macaamiishaada inay la shaqeeyaan SaaS-da si ay u soo jiidan karaan aragtiyo qiimo leh isla markaana ay u aqbalaan ra'yigooda si loo hagaajiyo khibrada isticmaale iyo qaabeynta wax soo saarka. Si firfircoon u xallinta dhibaatooyinka isticmaalaha iyo cabbiraadda adeegsiga ayaa gacan ka geysan kara yareynta heerarka nabarrada iyo kor u qaadista koritaanka.
Tags: xisaabi xaddiga buurnidaxisaabinta nabarsaassaas curnqiimaha saas churntirakoobka saas churnsaamiga deg dega ah
Ganacsade dijitaal ah oo xamaasad leh oo aqoon dhawaaq leh ku leh dhinacyada sida qalabka SaaS, CX, tirakoobka, iwm. Markii hore, wuxuu u shaqeyn jiray shirkadaha ugu waaweyn sida SportsKeeda iyo Neil Patel Digital India, wuxuuna hadda ka shaqeeyaa SmartKarrot Inc. Wuxuu jecel yahay inuu akhriyo buugaagta xilliga firaaqada iyo qof aad u jecel shaqooyinka Agatha Christie.
Sida Loo Sifeeyo Tarjumaaddaada Suuqgeynta Kharashaad Si Aad Uga Faa'iidaysato Boomka Ecommerce
Akadeemiyada Agorapulse: Ka hel shahaado baraha bulshada